Lip | SAI Cosmetic
Gawjuz Pink ( Lip Cushion )
Velvet Lip Cushion
Keeps your lips moist yet velvet feeling soft yet strong emotion & everlasting perfection
Types: Secret Admirer(Velvet Lip Cushion)
Net Weight : 2.5 ML / 0.09 fl oz (0.0025515 kg )
Price : 15000 Ks
Any time, any place, you are the most gorgeous one if the Secret Admirer (Velvet Lip Cushion) – Gawjuz Pink is with you.
Secret Admirer (Velvet Lip Cushion) – Gawjuz Pink ရဲ့ တည်ကြည်ပြီး ခန့်ငြားထည်ဝါတဲ့ အလှကိုပေးနိုင်တဲ့ အစွမ်းကြောင့် အချိန်မရွေး၊ နေရာမရွေး လူတကာရင်ဖိုစေတဲ့ နှုတ်ခမ်းအလှပိုင်ရှင်မျိုးအဖြစ်ရှိနေစေမှာပါ…။
Sexy Bomb ( Lip Cushion )
Peach colored Secret Admirer (Velvet Lip Cushion) – Sexy Bomb that will make you sizzle in summer.
Peach “မက်မွန်သီးရောင်” ရှိတဲ့ Secret Admirer (Velvet Lip Cushion) – Sexy Bomb က နွေရာသီမှာ ဆိုးထားတဲ့သူကို Glow Look နဲ့ တောက်ပပြီး လှနေစေမှာပါ။
Angel Eyes ( Lip Cushion )
The red color is all aboutabold statement. When you want to transform yourself fromawallflower intoamore powerful version, make the clicks at the bottom of Secret Admirer (Velvet Lip Cushion) – Angel Eyes.
ကိုယ့်ကိုကိုယ်ယုံကြည်မှု အပြည့်နဲ့ အားလုံးထက်ပိုပြီး ရဲရင့်ပြတ်သားမှုနဲ့ ထင်ပေါ်မှုကိုလိုလားလာတဲ့အချိန်မျိုးမှာ Secret Admirer (Velvet Lip Cushion) – Angel Eyes ရဲ့ ခလုတ်ကိုသာနှိပ်လိုက်ပါ ထွက်လာတဲ့ နှုတ်ခမ်းနီက သင့်ကို ရဲရင့်ပြတ်သားတဲ့ အသွင်အပြင်အဖြစ် ပြောင်းလဲသွားစေမှာပါ။
Baby Boo ( Lip Cushion )
As we have known that the color pink is adorable, the baby pink color is more adorable than the other colors. The smooth velvet touch of Secret Admirer (Velvet Lip Cushion)- Baby Boo can keep the long-lasting of adorable on your lips.
ပိုနူးညံ့ပြီး ထွေးပွေ့ထားချင်မိလောက်အောင် ချစ်စရာကောင်းတဲ့ Baby Pink အရောင်လေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ Secret Admirer (Velvet Lip Cushion) – Baby Boo ရဲ့ နူးညံ့တဲ့အထိအတွေ့က နှုတ်ခမ်းပါးလေးပေါ်မှာ ချစ်စရာကောင်းတဲ့အလှကို တစ်နေကုန် စွဲမြဲနေစေမှာပါ။
Brown Sugar ( Lip Cushion )
Here is the Secret Admirer (Velvet Lip Cushion) – Brown Sugar who is the owner of the sweetest brownish smiles you have seen before.
ချိုမြိန်တဲ့အပြုံးအောက်မှာ မြင်သူတကာကို မိန်းမောကျန်ခဲ့စေဖို့ Secret Admirer (Velvet Lip Cushion) – Brown Sugar တစ်မျိုးတည်းနဲ့တင် ပြီးပြည့်စုံနေပါပြီနော်…။
Dear ( Lip Tattoo )
Lip Tattoo ( Tint Tint ) – Moist-Matte, Long- wearing, Light Weight. – Non-transferrable, Smudge-Proof, Water-Resistant
Types: Tint Tint
Net Weight : 4.5 g / 0.16 fl oz (0.0025515 kg )
Price : 14000 Ks
The most attractive color for your perfect look once you wear Tint Tint Dear
သူ့အရောင်လေးကတော့ ချစ်ရတဲ့ သူကို နှစ်ခါပြန်လှည့်ကြည့်စေတဲ့ attractive အဖြစ်ဆုံးအရောင်လေးပေါ့..။ဆိုးထားလိုက်တာနဲ့ Perfect Look လေးဖြစ်စေပါတယ်။
Babe ( Lip Tattoo )
The perfect match for your pinkish lips is not other than Tint Tint babe. Once you wear it, your babe look is undeniable.
“သူလေးကတော့ နှုတ်ခမ်းသားဖူးဖူးလေးတွေနဲ့ အရမ်းလိုက်တဲ့ Babe Pink အရောင်လေးပါ။ ဆိုးထားလိုက်တာနဲ့ ဖြူစင်လွန်းတဲ့ Babe Look လေးစေပါတယ်။”
Beloved ( Lip Tattoo )
Independent Women’s Favourite Choice , red color is represented for the bravery and confidence. Once you wear SAI Beloved, you will instantly own the essence of love and confidence!
ရဲရင့်ခြင်းကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ အနီရောင်လေးကတော့ Independent ဖြစ်တဲ့ သူတို့အများဆုံးရွေးချယ်လေ့ရှိတဲ့အရောင်လေးပေါ့။ ဆိုးထားလိုက်ရုံနဲ့ အချစ်တွေအားလုံးကိုအပိုင်သိမ်ထားနိုင်တဲ့ Beloved လေးပါ။
Darling ( Lip Tattoo )
Imagine to own Glow Look? Try our peach color Tint Tint Darling !
မက်မွန်သီးရောင်လိုလို၊ လိမ္မော်ရောင်လိုလို Darling က ဆိုးထားတဲ့သူအဖို့ Glow Look လေးကို ပိုင်ဆိုင်စေမှာပါ။